Cape ho an'ny alika, mafana kokoa tsy azo atao | Dogs World
Nat Cherry | 15/11/2021 12:29 | Fitaovana alika
Ny kapaoty alika dia akanjo tena ilaina amin'ny volana mangatsiaka, indrindra raha avy ny orana na ny lanezy, na dia misy tokoa aza ny tsirony rehetra (olona sy alika): akanjo orana, toy ny palitao ary na dia akanjo aza.
Ao amin'ity lahatsoratra ity Holazainay aminao ny capes tsara indrindra ho an'ny alika ary, ho fanampin'izany, dia holazainay aminao ny karazany samihafa, ny fomba mahazatra ny alika amin'ny akanjo ary raha tsara ny manafina azy ireo. Manoro hevitra ity lahatsoratra hafa ity ihany koa izahay akanjo ho an`ny alika kely: akanjo mafana sy jumper!
Oslueidy Dog Coat...
Idepet palitao tantera-drano ...
Akanjo alika Fossrn ...
Peppo sy Pets -100 ...
Akanjo alika ...
JoyDaog - Vehivavy ...
1 Ny akanjo tsara indrindra ho an'ny alika
1.1 Cape jacket
1.2 Cape ho an'ny alika kanto
1.3 Akanjo mangarahara hooded
1.5 Tartan print cape coat
1.7 Akanjo mpamosavy misy capita
2 Karazana sosona sy fiasa
2.1 Layers toy ny palitao
2.2 Layers ho akanjo
3 Afaka mampiakanjo ny alikako ve aho?
4 Ny fomba hahatonga ny alika zatra mitafy akanjo
5 Aiza no hividianana capes alika
Ny akanjo tsara indrindra ho an'ny alika
Idepet Dog Coat...
Ity palitao karazana cape tena mahazo aina ity dia tena mahazo aina ny mitafy sy manala satria tsy maintsy amboarina avy eo aloha ihany. Ny tapany afovoany dia manitsy ny lamosin'ny alika satria misy elastika izy, izay manakana azy tsy hihetsika ihany koa. Izy io dia vita amin'ny landihazo, tena mafana sy malefaka ary, ankoatra izany, dia misy amin'ny loko maro (mavokely, mavo, volondavenona ary manga) ary habe samihafa. Misy lavaka kely koa ao ambadika mba hahafahanao mametraka ny tady.
Amin'ny lafiny ratsy, misy mpampiasa mitaraina fa kely ny habenyNoho izany, raha manapa-kevitra ny hividy azy ianao, dia ataovy azo antoka fa nandrefy tsara ny alikanao ianao.
Cape ho an'ny alika kanto
Bwiv Dog Coat...
Ity palitao cape ity dia tsy malefaka fotsiny, mafana be ary mora apetraka (misokatra tanteraka ary manitsy amin'ny velcro), manana endrika tsara tarehy tsotra ihany koa izy. Misy amin'ny loko maromaro izy io, na dia volondavenona aza no miakanjo bebe kokoa, ary mety tsara ho an'ny alika lehibe. Ny palitao koa dia misy tsipiriany roa izay mahatsara azy kokoa: vozon'akanjo midina izay miaro ny alika amin'ny hatsiaka ary fehiloha fingotra eo amin'ny farany ambany mba hampidirana ny rambony mba tsy hihetsiketsika sy hahatsapa tsara ny lamba.
Akanjo mangarahara hooded
Dociote Waterproof ho an'ny...
Amin'ireo kapa ho an'ny alika, ny akanjo orana no tena ilaina. Ity modely ity dia karazana cape satria manana zipo, izay tsy manakana ny fihetsiky ny alikantsika. Ahitana pitsopitsony hafa mahaliana, toy ny kapoty misy tapany ambony mangarahara mba tsy hanala ny tazana, tady mitaratra sy tselatra ao ambadika, voaaro amin’ny velcro, mba hahafahan’ilay tady mandalo. Ary, mazava ho azy, dia tantera-drano tanteraka.
Ho avy ny Krismasy ary azonao atao ny mangataka ny alikanao hifanaraka amin'ny tontolo iainana. Raha manaiky izy (tadidio fa tsy tokony hanery azy hanao izay tsy tiany ianao) tena mahafatifaty io kapa mena miaraka amin'ny satroka mifanentana io. Izy io dia amboarina amin'ny velcro ary tena mahazo aina sy mafana, ankoatra izany, dia tsy hanakana ny hetsika ataonao.
Tartan print cape coat
Fotaka Paws Coat ho an'ny...
Misy zavatra vitsivitsy kokoa kanto kokoa noho ny tartan Scottish, lamina tsy ho lany tamingana ary tsy mijery tsara amin'ny olombelona fotsiny., ho an'ny alika koa. Miaraka amin'ity modely tonga lafatra ho an'ny Westy ity, ny alikanao dia afaka mandehandeha mafana. Ho fanampin'izany, dia tena mora ny mitafy, satria manitsy eo anoloana fotsiny miaraka amin'ny bokotra roa (tsy mila mametraka ny tongotra na aiza na aiza) ary misy fehikibo eo afovoany.
Ity akanjo lava karazana poncho ity dia tena mora apetraka, satria ny lohan'ilay biby ihany no tsy maintsy ampidirinao amin'ny tendany. Taty aoriana, Azonao atao ny manitsy fehikibo misy velcro sy buckle mba tsy hihetsiketsika loatra ny akanjo, ary koa ny fehin-kibo elastika roa aoriana.. Ho fanampin'ny fanontana camouflage sy ho fampiononana azy, ny palitao orana dia miavaka amin'ny fisian'ny taratra taratra mba hahitana haingana ny alikanao raha sendra hazavana kely. Farany, ity vokatra ity dia misy amin'ny loko roa sy habe maromaro.
Akanjo mpamosavy misy capita
Nofaranana tamin'ny akanjo mangatsiatsiaka sy tonga lafatra ho an'ny Halloween izahay (na dia tsy sasatra aza ny manindry hoe, raha tsy tia manao akanjo ny alikanao dia aza manery azy). Misy ampahany roa izy io: kapaoty lilac amin'ny akora manjelanjelatra toy ny satin izay mifanentana amin'ny anoloana sy afovoany ary satroka kely mahafatifaty misy olioly mivoaka avy ao. Tsy manana quirks manokana afa-tsy ny tena mahafinaritra!
Karazana sosona sy fiasa
Cape ho an'ny alika sokajy roa lehibe izy ireo, arakaraka ny tanjon'ny fitazonana ny biby fiompintsika mafana na maina na akanjo.
Layers toy ny palitao
Toy ny palitao, capes ho an'ny alika dia hevitra tena tsara satria mora ny mitafy. Amin'ny ankapobeny izy ireo dia misy tapany anoloana izay ampidirana ny tongotra eo anoloana ary ny ampahany iray, mankeo afovoan'ilay tapa-damba, dia mitana ny andilany mba tsy hisidina ilay akanjo. Ny tsara amin'ity rafitra ity dia tsy vitan'ny hoe tena mahazo aina ny mitafy sy manala azy, fa mandrakotra ampahany betsaka amin'ny alika tsy manasarotra ny fihetsiny.
Layers ho akanjo
Ny karazana capes lehibe hafa dia ireo izay ampiasaina ho saron-tava. Na akanjo mahafinaritra hanaovana Krismasy na akanjo amin'ny Halloween na Karnavaly, ny kapa dia afaka mamela ny alikanao ho lasa vampira, mpamosavy, mpamosavy ... Na izany aza, satria safidy tsara kokoa, ity safidy ity dia miteraka olana ara-moraly, araka ny ho hitantsika etsy ambany.
Afaka mampiakanjo ny alikako ve aho?
Tsy isalasalana fa tena mahafatifaty ny alika rehefa miakanjo, na dia hetsika natao ho an'ny fialam-boly ho an'ny olombelona fotsiny aza no miteraka olana. Noho ny antony mifandray, ny alikantsika dia tsy afaka milaza amintsika hoe "esory ity akanjo ba fa toa tonneau aho", noho izany, tsy mahafantatra ny heviny, ary tsy manana asa azo ampiharina (hafa ny resaka akanjo mba hisorohana ny hatsiaka, ny rivotra na orana, satria mikarakara ny fahasalamany izy ireo), tsy dia tsara loatra ny mampiakanjo azy ireo amin'ny akanjo.
Raha hampiakanjo azy ireo ianao, na dia tsy misy misakana anao aza, tadidio farafaharatsiny ireto manaraka ireto:
Mitadiava akanjo mety aminao mahazo aina, mora apetraka sy esorina, ary tsy manakana ny hetsika. Miezaha koa mitady ny habe marina ary aza manindry mafy.
Mikaroha iray lamba tsy mangidihidy ary raha azo atao mazava.
Y indrindra fa aza terena. Raha hitanao fa tsy mahazo aina izy dia esory avy hatrany ny akanjo. Ny tsy fahamendrehana dia tsy vitan'ny hoe manandrana manala ny akanjo, fa mety hiharihary ihany koa raha milelaka be izy, mihiaka na mijanona.
Momba ny kosmetika, aza mampiasa vokatra natao ho an'ny olombelona amin'ny alika na biby hafa. Tsy natao ho azy ireo ireo ary mety hiteraka may sy tsy mahazo aina.
Ny fomba hahatonga ny alika zatra mitafy akanjo
Raha te hahazatra ny alikanao ianao mitafy akanjo satria mipetraka any amin'ny toerana mangatsiaka na orana ianao, Mariho fa:
Efa voaomana amin'ny hatsiaka ny karazana sasany, izay ahafantaranao tsara ny tenanao alohan'ny hividianana palitao ho an'ny biby fiompinao. Ohatra, ny alika kely indrindra dia ireo izay mankasitraka indrindra ny akanjo mafana.
Mikaroha iray akanjo alika izay mahazo aina. Na akanjo orana io na palitao, jereo fa mifanaraka amin'ny filan'ny alika ny famolavolana, sao manakana ny fihetsiny ary ny habeny no mety aminy, na lehibe na kely.
Aza manao izany raha tsy rehefa mivoaka ianao. zatra tsikelikely mametraka azy mandritra ny fotoana fohy ao an-trano. Mazava ho azy fa aza avela hiara-matory aminy mihitsy izy na tsy hahita azy mba tsy hatahotra.
Aiza no hividianana capes alika
Afaka mahita ianao karazana akanjo alika rehetraTsy sosona fotsiny, amin'ny toerana maro samihafa, manomboka amin'ny fivarotana ankapobeny mankany amin'ny toerana manokana. Ohatra:
En Amazon Hahita sosona maro isan-karazany amin'ny karazany rehetra ianao, na palitao, akanjo, na akanjo. Mazava ho azy, tandremo tsara ny fanehoan-kevitra satria indraindray dia miharatsy ny kalitao. Ny tsara anefa dia azonao atao ao an-trano ao anatin'ny andro vitsivitsy izany ary misy modely maro.
En fivarotana manam-pahaizana manokana toy ny TiendaAnimal na Kiwoko dia afaka mahita akanjo mafana ho an'ny alikanao koa ianao. Izy ireo dia tranonkala izay tsy vitan'ny hoe manana vokatra avo lenta, fa azonao atao ihany koa ny mandeha any amin'ny dikan-ny ara-batana mba hijerena raha io no tadiavinao.
Farany, safidy hafa mahaliana ny toerana toy izany Etsy, izay ahitanao akanjo vita tanana natao manokana ho an'ireo biby ireo. Mazava ho azy, amin'ny maha-zava-misy azy manokana sy vita tanana, dia manana vidiny ambony lavitra noho ny safidy hafa izy ireo.
Manantena izahay fa nanampy anao hahita, ao anatin'ity antontam-piaro alika ity, izay mety indrindra amin'ny biby fiompinao. Lazao aminay, manao akanjo tsara ve ny alikanao? Ahoana no nahazatra anao? Inona no mety aminao indrindra amin'ny ririnina?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Cape ho an'ny alika, mafana kokoa tsy azo atao